कार्यस्थलमा कति सुरक्षित छन् महिला ? |
कार्यस्थलमा कति सुरक्षित छन् महिला ?
प्रकाशित मिति :2018-06-15 15:42:29
ललितपुर । काठमाडौंमा कार्यरत एक प्रहरी महिला आफ्नै सहकर्मीबाट हिंसामा परिन् । सहकर्मीकले पटक-पटक अपशब्द बोल्ने, जिस्क्याउने गर्दा उनी हैरान बनिन् । तर आफूमाथि भइरहेको यस्तो हर्कतबारे उनले मुख खोल्न भने सकिनन् ।
कहिले भेटमा, कहिले फोनमा अनेक किसिमले उनलार्ई पच्छाइरहेका सहकर्मी एक दिन त राती १० बजेतिर ती प्रहरी महिलाको कोठामै पुगे । जहाँ उनी एक्लै सुतेकी थिइन् ।
‘राती कसैले ढोका ढक्ढक्यायो । को हो ? भनेर सोध्दा उसले आवाज दिने बित्तिकै मैले चिनिहालें । अनि हातमा लठ्ठी लिएर लखेट्दै भोली हाकिमलार्ई भन्दिन्छु भनेपछि भाग्यो’ प्रहरी महिलाले भनिन् ।
घटनापछि पनि सहकर्मी पुरुषले सताउन नछाडेपछि उनले हाकिमलार्ई मौखिक उजुरी दिइन् । ‘हाकिमले उनलार्ई घोप्टो पारेर लौरोले पिटे । अहिले उसले मलार्ई ठाडो शिर गरेर हेर्नै सक्दैन’ उनले भनिन् ।
‘हामी महिला प्रहरी भएको ठाउँमा पुरुष प्रहरीले छाडा बोल्छन् । सुन्नै नहुने कुरा गर्छन् । केहि बेरपछि सर यो त नराम्रो भयो भन्छु, फेरि पनि त्यसै गर्छन् । अपशव्द सुन्ने त बानी जस्तै भइसकेको छ’ उनले कार्यस्थलमा सहकर्मीबाटै यौन दुव्र्यवहार हुँदाको नमिठो अनुभव सुनाइन् ।
काठमाडौंकै सरिता गिरी ४ वर्षदेखि टेम्पु चलाउँदै आएकी थिइन् । एउटै रुटमा काम गर्ने अर्को टेम्पो चालक भेटमा नबोल्ने फोनमा भने अनेक थरीका कुरा गर्दै सताउने गरेको उनले बताइन् ।
फोनमा यौनका कुरा गरेर हैरान गरेपछि छोरी संस्थामा उजुरी दिएको सरिताले बताइन् । त्यहाँबाट कुनै न्याय नपाउँदा २०७४ साल कार्तिकमा जाउलाखेल प्रहरी चौकीमा उजुरी गरिन् । फोनबाट अनेक कुरा गरे पनि आफूलार्ई कल रेर्कड गर्न नआउँदा प्रमाण राख्न नसकेको उनले बताइन् ।
जाउलाखेल प्रहरीमा उजुरी गर्दा टेम्पु चालकलार्ई १ हप्ता जेल राखेर ५ हजार जरिबाना तिरायो । आफूले उजुरी गर्दा ग्यारेज सञ्चालक समितीले पटकपटक छुटाउन दबाब दिएको उनले सुनाइन् ।
अरुको टेम्पु चलाएर घरखर्च चलाईरहेकी उनले आफूमाथि भएको दुव्र्यवहारको प्रतिकार गर्न खोज्दा जागिरबाट हात धुनु परेको दुखेसो गरिन् ।
महिलाले पुरुष सहकर्मी वा हाकिमबाट भोग्नु परेको दुव्र्यवहारका अनेक रुप छन् । कतिपयले बोलीचालीको शब्दबाट हिंसा गरिरहेका हुन्छन् भने कतिपयले व्यवहारबाट पनि हिंसा गरिरहेका हुन्छन् ।
काठमाडौंकी दिपा श्रेष्ठ जिल्लाकै एक रेष्टुरेटमा काम गर्छिन् । रेष्टुरेन्टमै साहुँबाट उनले अनेक समस्या झेल्नु परेको छ । साहुले ग्राहक बोलाएर उनीहरुसँग बसेर खाना खान, खुसी पार्न अनेक थरिका दबाब दिन नछोडेपछि उनी प्रहरीकोमा पुगिन् ।
प्रहरी चौकीमा आफूमाथि भएको दुव्र्यवहार बारे उजुरी दिँदा उनी कामबाटै निकालिन् । प्रहरीले समेत आफूलार्ई नै दोषी भन्दै उजुरी दर्ता गर्न नमानेको उनले सुनाइन् ।
त्रिभुवन विश्व विद्यालयका उपसचिव डाक्टर रेणुका थापाले महिलालार्ई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक रहेकाले महिलाले समस्या भोगिरहेको बताइन् । आफू पनि महिला भएकाले यस्ता कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसाबाट अछुतो नरहेको बताइन् ।
गृहमन्त्रालयका सहसचिव नारायण दुवाडीले महिलालाई कार्यस्थलमा हिंसा हुने गरेको भए पनि उजुरी नआएको बताए । जिल्लाका कुनै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अहिलेसम्म यस्ता हिंसाको उजुरी नआएको उनको भनाइ छ ।
कुनै पनि महिलाले आफूमाथि भएको जस्तो सुकै हिंसाबारे जिल्लामा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराउन सक्ने भन्दै उनले आफूमाथि हुने हिंसा सहेर नबस्न आग्रह गरे ।
हिंसा पीडित महिलाका गुनासो सुन्ने धेरै निकाय छन् । तर महिला आफैले हिंसा सहेर बस्ने गरेको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे ।
नेपाल सरकारले पीडितको गुनासो सुन्न सरकारको निकाय ‘हेलो सरकार’ सञ्चालनमा ल्याएकाले आफूलाई भएको पीडाबारे त्यसैमा फोन गरेर गुनासो राख्ने व्यवस्था गरेको बताएका छन् । कार्यस्थल वा अन्य ठाउँमा भएको हिंसाबारे उजुरी गरे सरकार न्याय दिन जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य बिना श्रेष्ठले महिला आफ्नो इज्जत जाने डरले आफूमाथि भएका हिंसा सहेर बस्ने गरेको बताइन् । हिंसा भएको ७० दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था रहेकाले आफूमाथि भएका हिंसा सहेर नबस्न उनले महिलालाई आग्रह गरिन् ।
अहिले सबै जिम्मा स्थानीय सरकारको भएकाले स्थानीय तहले यसमा विशेष जोड दिन आवश्यक रहेको बताइन् । कतिपय महिलालाई हिंसा भए उजुरी कहाँ गर्ने भन्ने समेत थाहा नहुँदा त्यस्ता महिलालाई कानुनीबाटो देखाइदिने मुख्य जिम्मा अहिलेका स्थानीय सरकारको रहेको उनको भनाइ छ ।
हिंसा भए वापत पीडकले कस्तो सजाय पाउँछ, पीडितले कस्तो न्याय पाउँछ भन्ने समेत जानकारी नभएकाले कानुनबारे सबैलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।
ऐनमा पनि कतिपय कुराहरु अझै छुटेकाले कानुन फेरि संसोधन गर्नेतर्फ आफूले पहल गर्ने बताइन् । कार्यस्थलमा आफ्नै हाकिम, सहकर्मीबाटै महिला असुरक्षित हुनुपरेको दुःख पोख्दै यस्तो हिंसा गर्ने जो सुकैलाई कानुनी कावाही गर्ने उनले बताएकी छन् ।
ऐनमा यस्तो छ ?
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ अनुसार कसैले कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलार्ई कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेमा सोबाट पीडित कर्मचारी, सेवाग्राही वा निजका तर्फबाट जोसुकैले त्यस्तो व्यक्ति उपर व्यवस्थापक समक्ष पन्ध्र दिनभित्र लिखित वा मौखिक रुपमा गुनासो गर्न सक्नेछ ।
(निवारण) ऐन, २०७१को दफा १२ को उपदफा १ मा कसैले कुनै कर्मचारी वा सेवा ग्राहीलाई यौन जन्य दुव्र्यवहार गरेको ठहरेमा निजलाई कसुरको प्रकृति हेरेर ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ ।